ပါ၀င်လှူဒါန်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း - Eden Centre for Disabled Children
by User2| May 7, 2015 | Get Involved |0comments
ဧဒင်ရိပ်မြုံသို့ ပေးလှူခြင်းအားလုံးသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိိ ဧဒင်ရိပ်မြံုသို့ပုံမှန်လာရောက်နေသော မသန်စွမ်းကလေးများ၏ ဘဝအတွက် ထိရောက် စွာအသုံးပြုနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြံုသို့ လစဉ်ပုံမှန်လှူဒါန်းပေးခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ကြံုကြိုက်၍ တစ်ခါတစ် လေပေးလှူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ဤကောင်းမွန်သောပရဟိတလုပ်ငန်းတွင် မည်သူမဆို ပါ၀င်နိုင် ကြပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြံု၏ အစီအစဉ်တစ်ခုတစ်ခုကိုတာ ၀န်ယူပေးခြင်း၊ လို့အပ်သောပစ္စည်းကိရိယာ များဝယ်ယူပေးခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့်ပါ၀င်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြံုသည်ပါ၀င်လှူဒါန်းမှုအားလုံးကို တာဝန်ယူမှုအပြည့်ဖြင့် လို့အပ်သူများအတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သော်ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လှူဒါန်းနိူင်ပါသည်။
ပြင်ပ နိုင်ငံခြားမှ ပေးလှူပါက။ လက်ရှိတွင် ဧဒင်၌ Online နည်းများဖြင့်ပေးလှူမှုကိုလက်မခံနိုင်သေးသော်လည်း၊ ဧဒင်ရိပ်မြံု၏အောက်ဖော်ပြပါ ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ငွေလွဲလှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်ပေးလှူခြင်းဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့၏လုပ်ငန်းများကို ကြိုတင် စီမံချက်ချမှတ် ကာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Account holder’s Name:       Eden Centre For Disabled Children
Daw Tha Zing & U Ral Tu
Bank:                                     Myanma Foreign Trade Bank
Branch:                                  Mahabandoola, Kyauktada Township
Account No:                          1DA0300044
Swift Code:                           MFTBMMMY
အထက်ဖော်ပြပါဘဏ်သို့ ပုံမှန်ပေးလှူခြင်းကို စိတ်ချစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပလှူဒါန်းခြင်း။ အကယ်၍ ပြည်တွင်းဘဏ်စာရင်းရှိပါက ပေးလှူသူအနေဖြင့် ဧဒင်ရိပ်မြံု၏ ပြည်တွင်းဘဏ်စာရင်းသို့ လွယ်ကူစွာပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြံု၏ ပြည်တွင်းဘဏ် စာရင်းအချက်အလက်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်-
U Tha Uke & U Ral Tu
Bank:                                     KBZ (Kanbawza Bank Co. Ltd)
Account No:                          0211220105660
Ref:                                      Please put your name and email address here so we can contact you
စာတိုက်ဖြင့်ပေးလှူခြင်း။ အကယ်၍ ချက်လက်မှတ်ဖြင့် တစ်နယ်တစ်ခြားမှ ပေးလှူမည်ဆိုပါက ဧဒင်ရိပ်မြံု၏ ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ ထည့်နိုင်သည့်ချက်လက်မှတ်ဖြင့် မည်သူမဆိုလွယ်ကူစွာ ပေးလှူနိုင် ပါသည်။
Eden Cenret for Disabled Children
No. 56, War Oo 4th,Street
Phawkan, Insein, Yangon, Myanmar.
Please do not send any cash in the post or send any financial information in an email.
အကယ်၍ပေးလှူရန်အတွက် ပိုမိုသိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ အီးမဲလ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်ပေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
– အီးမေးလ် – [email protected]
– တယ်လီဖုန်း – +95(1) 640399